Mumakore achangopfuura, nenyika chengetedzo yesimba uye marongero ekudonhedza uye kutarisisa kwepasirese kune yakaderera kabhoni hupfumi, pamwe nekuvandudzwa kwehupenyu hwevanhu, vanhu vakanyanyisa kutarisisa hupenyu hwepamusha. Semhando nyowani yetsvina ...
Mune iyo yekudonha mvura uye negadziriro yemvura, mapaipi chikamu chakakosha chayo, saka mhando yemapaipi inoita chinhanho chakakosha. Kubva pane zvakaitika kare, zvichienzaniswa nepurasitiki kana pombi dzesimbi, pe mapaipi ane anotevera maitiro: density Low density, yakakwira simba, yakanaka solidnes ...
Ndezvipi zvakanakira mapaipi-akakomberedzwa mapombi akaenzaniswa neepombi dzetsika
HDPE yakapetwa-pamadziro yakakomberedzwa pombi yakatanga kubva kuGerman. Inoshandiswa zvakanyanya muChina nekuda kwematambudziko mazhinji akaitika mukushandiswa kwepombi dzesimende dzemapaipi dzemvura munyika. Mushure mematambudziko mazhinji akaitika mukushandiswa kwesimendi yenyika simende dra ...